ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်: ဦးဌေးဝင်း(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ရုံး) ကို စစ်ဆေးစေလို
သတင်း၊ နည်းပညာ၊ ဆော့ဝဲလ်နှင့် ဗဟုသုတများ
ဦးဌေးဝင်း(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ရုံး) ကို စစ်ဆေးစေလို
ပထမဦးဆုံး ကျွန်တော်ရဲ့စာလေးကိုတော့ မပယ်လိုက်ပါနဲ့ဗျာလို့တောင်းပန်လိုပါတယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးတင် ပေးပါဗျာ။ ကျွန်တော်ကအရင်ကဒီလိုပို့ရင်ရတယ်မသိလို့ ကြိတ်မှိတ်ခံခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုပါ။ ကျွန်တော်ကမိတ္ထီလာ၊ ပေါက်ချောင်းရပ်ကွက်ကပါ။ ဖြစ်ခဲ့တာကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကပါ။ အခု နာမည်ကြီး နေတဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ရုံးကအကြီ်းအမှူးတစ်ယောက်ပေါ့ဗျာ။ သူ့နာမည်က ဦးဌေးဝင်း၊ ရာထူးကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးပါ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးဆန်းဆင့်ဂုဏ်သတင်းမွှေးသလောက် အဲဒီ ဦးဌေးဝင်း ကတော့ ကျွန်တော်တို့ရပ်ကွက်ထဲမှာချဉ်ဖတ်ကြီးပါဗျာ။ ဦးဌေးဝင်းက လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက် သူ့ယောက္ခမဆုံးတော့သူ့ယောက္ခမအသုဘအတွက် လူမစည်မှာစိုးလို့တဲ့ဗျာ။ ရပ်ကွက်ဥက္ကဋ္ဌ ကနေ တဆင့်ရပ်ကွက်သူရပ်ကွက်သားတွေကို လူအယောက် ၁၀၀ မလိုက်မနေရဆိုပြီးဆင့်ခေါ်တယ်ဗျာ။ အဲသလောက်လုပ်ခွင့်ရှိလားလို့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးဆန်းဆင့်ကို ကျွန်တော်မေးပါရစေဗျာ။
လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးဦးဆန်းဆင့်ခင်ဗျား လူကြီးမင်းက ပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ပေးနေတယ်ဆို။
ကိုယ်နဲ့လုံးဝမသိတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ နာရေးကိစ္စကို လိုက်ရတယ်ဆိုတာမကောင်းပါဘူးဗျာ။ လူကြီးမင်းစဉ်းစားစေလိုပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေရှိနေရင်တိုင်းပြည်ဘယ်လိုလုပ်တိုးတက်မလဲဗျာ။ ပြည်သူတွေကိုဖိနှိပ်နေတာကတော့လွန်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ပြောချင်တာက သူကမိတ္ထီလာမှာတာဝန်ကျနေလို့၊အသိမိတ်ဆွေမရှိလို့ဆိုရင်တော်ပါသေးတယ်။ အခု ကိစ္စက
အဝေးကြီးကနေအမိန့်ပေးခိုင်းစေနေတဲ့ ၀န်ထမ်းဆိုး၊အကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းမျိုးကို လူကြီးမင်း သိသင့်ပါတယ်ခင်ဗျား။
သူ့အနားမှာနေရတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေပေါ်ဆို တော်တော်အနိုင်ကျင့်မယ်လူမျုိးလို့မြင်မိတယ်ခင်ဗျာ။ လူကြီးမင်းစစ်ဆေးပေးလိုပါတယ်ခင်ဗျား။ ဦးဌေးဝင်းသာမိတ္ထီလာမှာတာဝန်ကျမယ် ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့မိတ္ထီလာမြို့ကြီးတော့ပျက်စီးမှာအမှန်ပဲဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ဖြစ်ဖြစ်ချင်းတော့ပြောကြမလို့ပါပဲဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး။ အခုတော့
ဂျာနယ်တွေထဲမှာလည်းလူကြီးမင်းက ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေကိုလိုက်လံကူညီစောင့်ရှောက်နေတာတွေမြင်ရတော့ အရမ်းအားကိုးမိတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ ဧရာဝတီတိုင်းသားတောင်ဖြစ်ချင်လာတယ်။
ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကိုဂရုစိုက်တာကလည်း ကိုယ့်သားသမီးလိုပဲဗျာ။ အရမ်းလေးစားပါတယ်။
ဦးဌေးဝင်း(ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဧရာဝတီတိုင်းလွှတ်တော်ရုံး) ကို
စစ်ဆေးပြီး နောက်မလုပ်အောင် သတိပေးစေလိုပါတယ် လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီး
ပထမထပ် ငှားရန် ရှိသည်။
ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် ငှားမည်။
ဆက်သွယ်ရန် Mobile Phone
09 - 4308 8253
09 - 0943 057 907
Home Phone 0121 0882
RFA TV News Update
VOA TV News Update
Subscribe to Simon-vlogby Email
ဆက်သွယ်ရန် ၀၁၆ ၆၀၂ ၅၅၃၆
<img border="0" src="http://2.bp.blogspot.com/-Hzttu2MqWKU/Uvg-YiHHgAI/AAAAAAAAa2w/Jd_ELiwX7sM/s320/Simon-vlog_clip.gif" style="border-radius: 5px; width="100%" /></a>
General Aung Sun
Widget by Online Reading Site
ပါရမီ ဓမ္မ အင်တာနက်
The Buddha’s Last Word
မိုးကုတ် ဝိပဿနာ ရိပ်သာ
မန္တလေး မဟာမြတ်မုနိ ရုပ်ရှင်တော်ကြီး
ဓမ္မစေတီ ဆရာတော် ဦးကောသလ္လ
ဓမ္မ MP3 ဒေါင်းလုပ်
Myanmar Unicode & NLP Research
Bin's Corner ဓါတ်ပုံများ
We Fight We Win
ရန်ကုန်တိုင်း(မ်) ခေတ်လူငယ် Eleven မီဒီယာ မြန်မာတိုင်း(မ်) နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း
BBC မြန်မာပိုင်း အစီစဉ်
RFA မြန်မာပိုင်း အစီစဉ်
VOA မြန်မာပိုင်း မိုးမခ
သံလွင်အိမ်မက် ဈေးကွက် ဂျာနယ်
To Day မဂ္ဂဇင်း
MY MC NEWS
မာယာ အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်း မောက္ခပညာရေးမဂ္ဂဇင်း ယနေ့မြန်မာ
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ မြို့တော်ပုသိမ်
ပိတောက်မြေ ဧရာဝတီ ကိုပီတာ၏အတွေးပုံရိပ်
မြန်မာ IT Pro
မြန်မာ IT Resource Info
Mystery Zillion Blog
နေမင်း IT Re-share Site ကိုကြီးလေး
ko kyaw myint Oo
Blink hacker group
မြန်မာ MP3Site
Free proxy surfing
best soccer gallery
HIV Info MM
Food T V
Blogcrowds Deluxe Templates
My Fun Doo-Templates
Nokia applications store Make-flash-websites
online for computers
pickatutorial
Upload Mega Share
Make Flash Website
Looking for bests
Share file link
CSS to Java Script
တက္ကဆီ မောင်းသူကို လိင် ဆက်ဆံ ခိုင်းပြီး အလို မပြည့်လို့ ဓါးနဲ့ ထိုးခဲ့တဲ့ အမျိုးသမီး
အိန်ဂျလီနာ ဂျိုလီနဲ့ ရုပ်ချင်းဆင်တူပြီး အသက် ၃၁နှစ် ရှိပြီဖြစ်တဲ့ Luminita Perijoc ဆိုသူ ရို မေးနီးယန်း အမျိုးသမီးကို တက္ကဆီမောင်း သူ အား ...
မယ်စကြ၀ဠာ အတွက် အကြိုရွေးချယ် (ရုပ်/သံ)
နှစ်ပေါင်း ၅၀ ကျော်အတွင်း မယ်စကြ၀ဠာ နိုင်ငံတကာ ပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကြမယ့် ပထမအဆင့် အလှမယ် ရေ...
Huawei G730-U00 ကို Root & mm font
Huawei Phone တွေကလည်း ဈေးကွက်ထဲမှာ သုံးရက်ကို တစ်မျိူးကို ထွက်တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ အရောင်းဆိုင် တွေလည်း အာရုံနောက် ရပါတယ်။ အခုလည်း...
အာဇာနည်နေ့ နံနက် 10 နာရီ 37 မိနစ် တိတိမှာ အလို အလျောက် ဥသြသံ ပေးမယ့် 19July.apk
ဒီ apk ကို ရတာနဲ့ ဖုန်းမှာ install လုပ်ထားပါ။ အခြား ဘာမှ ထပ်လုပ် စရာ မလိုဘဲ အာဇာနည်နေ့ နံနက် 10 နာရီ 37 မိနစ် တိတိမှာ ၂မိနစ်ကြာ ဥသြသံ ထွက်...
ချမ်းချမ်း - အိမ်မက် (2014) [Album] MP3
Bit Rate: MP3-128 kbps ၀၁။ ဗုဒ္ဓပူဇနိယ Listen, Download ၀၂။ အေတွးမမှားနဲ့ Listen, Download ၀၃။ အိပ်မက် (feat. ဟန်ထွန်း) Lis...
ကျောင်းသူ တစ်ဦးကို သားမယား ပြု ပြီး ပြည့်တန်ဆာ ခိုင်းစေသူအား အမှုဖွင့် စစ်ဆေး
၁၃ နှစ် အရွယ် ကလေးငယ်ကို အမျိုးသား တစ်ဦးက အကြိမ်ကြိမ် ကာမ ဆက်ဆံ ပြီးနောက် ပြည့် တန်ဆာ အိမ်သို့ ရောင်းချစေခိုင်းခဲ့မှုကြောင့် ပါဝင်ပတ်သ...
စန္ဒီမြင့်လွင် - ကလီယိုပါထရာ (2014) [Album] MP3
Bit Rate: MP3-128 kbps ၀၁။ ကလီယိုပါထရာ (Feat. ဖြူဖြူကျော်သိန်း) Listen, Download ၀၂။ Take Care Listen, Download ၀၃။ လည်...
ဦးဇင်း ဦးကျော်ဟိန်းနဲ့ ရုပ်ရှင် မင်းသမီး တသိုက်
ဓာတ်ပုံ- စိုးမြတ်သူဇာရဲ့ စာမျက်နှာ ပီမိုးနင်း - မိန်းမစိတ် ကျမ်း စာအုပ် (Ebook)
ပီမိုးနင်း - မိန်းမစိတ်ကျမ်း စာအုပ်လေးပါ။ ဖတ်ချင်၊ လေ့လာချင်၊ စူးစမ်းချင်တဲ့ သယ်ရင်းတွေ စိတ်ကြိုက် သာ ဒေါင်းပြီး ဖတ်နိုင် လေ့လာနိုင်ပြါ...
မန္တလေး ပဋိပက္ခ အတွက် သစ်ထူးလွင် သတင်း ဝက်ဘ်ဆိုက် တောင်းပန်
ရန်ကုန်၊ ဇူလိုင် ၂ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်နှင့် အရပ်သားအချို့ ဒဏ်ရာရရှိပြီး မော်တော်ယာဉ်များ ဖျက်ဆီးခံရသည်အထိ ဖြစ်ပွားခဲ့သော မန္တလေးမြို့တော်မှ ပဋိပက...
လမ်းမတော်မြို့နယ် ရွှေတောင်တန်းလမ်းတွင် ပထမထပ် ငှားရန် ရှိသည်။
☺ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် ငှားမည်.....☺
☺.....ဆက်သွယ်ရန် Mobile Phone (၁) 0943 088 253 Mobile Phone (၂) 0943 057 907
.....Home Phone 0121 0882☺